Izindaba - Kungenzeka yini ukuthi ukudla kwe-IQF kube yisixazululo sekusasa elizinzile?
Ngabe ukudla kwe-IQF kungaba yisixazululo sekusasa elizinzile?
Febhuwari 22, 2021 | Izindaba
Njengoba ulwandle luya ngokuya lungcola, amazinga aphansi komhlaba aphansi ngokomlando, akhuphula amazinga e-CO2 emkhathini kanye nesimo sezulu esiphuthumayo emathangeni ethu, akumangalisi ukuthi enye yezindlela ezintathu eziphezulu zokudla okusimeme zango-2021 inciphisa udoti wokudla. Lokhu kuyinto ebaluleke kakhulu okumele ithathelwe phezulu uma sihlose ukubhekana nokuntuleka kokudla futhi sinciphise ukuguquka kwesimo sezulu.
"Ngokwe-UN Environment Programme, cishe ingxenye eyodwa kwezintathu zokudla okukhiqizwa emhlabeni okudliwayo ngabantu minyaka yonke - cishe amathani ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.3 - kuyalahleka noma kumosheke." 
Iqiniso elididayo elibhekisisa cishe abantu abayizigidi ezingama-800 abangondlekile emhlabeni namuhla nemiphumela emibi yesimo sezulu esibonakala singenakunqandeka.
Uma sibheka udoti wezithelo nemifino, isimo siba sibi nakakhulu. Emazweni asathuthuka, u-40% wemfucuza yokudla wenzeka ngesikhathi sokuvunwa kanye nasekucubungulweni ngenkathi emazweni athuthukile - ngaphezu kuka-40% wokungcola kokudla kwenzeka emazingeni okuthengisa nawabathengi. Endabeni yokuthunyelwa kwamanye amazwe kusuka emazweni asathuthuka kuya emazweni athuthukile - izibalo ziyethusa. Imfucuza evela emikhiqizweni emisha ingafinyelela kuma-70-80% amakhulu uma sibala kusuka ensimini kuze kufike emakhishini abathengi abathengi. Ngaphezu kwalokho, ngokwezifundo zikazwelonke zase-Europe, "izithelo nemifino esanda kufakwa ifaka isandla cishe ku-50% wemfucuza yokudla eyenziwe yimindeni ye-EU". 
Ubani ongenza ini?
Ngakho-ke singayiphonsela kanjani inselelo le nhlekelele yokulahlwa kokudla? Enye indlela abaprosesa bokudla abazama ukwenza ingxenye yabo umkhuba wokukhuphula amabhayisikili ngokufaka inani emikhiqizweni nasemikhiqizweni eseleyo, kanti enye inkambiso enesibindi futhi ephumelelayo ukukhangisa nokuthengisa lokho okubizwa ngokuthi “ukudla okungalungile” noma imikhiqizo ebukeka ingaphelele lokho kungabekwa ngaphansi, kombala ongafanele, noma kube nesici ngandlela thile. Kukhona nezinhlangano ezizama ukubhekana nokudideka kwelebuli yosuku, ikakhulukazi embonini yobisi, ngakho-ke zisize ekuqedeni udoti wokudla.
Abakhiqizi bezinto zokusebenza, kepha, bangaletha isabelo sabo etafuleni. Umholi owaziwayo kwezobunjiniyela nokwenziwa kobuchwepheshe be-Individual Quick Freezing (IQF) - Inkampani i-OctoFrost - ukholelwa ukuthi ubuchwepheshe obusha be-IQF bungasetshenziswa ukubhekana nodaba lwemfucuza yokudla emazingeni amaningi ahlukene.
Izinto zokuqala kuqala, yini i-IQF?
I-IQF imele Ukuqandula Okukodwa Ngayedwa futhi kutholakala ngokusebenzisa imifudlana yomoya ebanda kakhulu futhi enamandla ukuhlukanisa ucezu ngalunye lomkhiqizo (ngokungafani neqhwa lesikole elidala) emhubheni wokuqandisa bese uthola imikhiqizo yokudla efriziwe ngokuphelele ngisho nokunamathelayo ukudla okunzima okufana nezithelo ezisikiwe, amajikijolo noma ushizi oshiziwe, inyama egayiwe noma enamanzi. Amathuba makhulu ngokwemikhiqizo engaba yi-IQF efriziwe futhi iningi lezithelo nemifino ozothola endaweni efriziwe esitolo sakho, yi-IQF iqandisiwe.
Uma kukhulunywa ngezinzuzo zemikhiqizo ye-IQF, kulula ukuthi kube phezulu kumthengi wokugcina manje ongakwazi ukukhipha inani elidingakalayo futhi agcine okusele efrijini labo (ngaphandle kwesidingo sokuncibilikisa lonke iphakethe).
Kepha ingabe into elula yanele namuhla? Abanye ochwepheshe bemboni yokudla bangakuphikisa lokho. Kubukeka sengathi abathengi abakaze bakhethe ikhwalithi, ukubukeka, kanye nenani lokudla okunempilo kokudla kwabo. Futhi kulapho usizo lwezobuchwepheshe lusiza khona. Ngokuqondile, izici zobuchwepheshe ezingenza ukuthi imikhiqizo efriziwe ibukeke iheha njengabalingani bayo abasha futhi ikhiye izakhamzimba zabo - yibona abashintsha umdlalo ekuziphatheni kwabathengi.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi izithelo nemifino efriziwe empeleni kusha kunomkhiqizo omusha futhi iqukethe izakhamzimba eziningi . Isizathu salokho ukuthi izithelo nemifino efriziwe kuvame ukuvunwa endaweni ephezulu kakhulu yokuvuthwa equkethe izakhamzimba eziningi nokunambitheka, futhi inqubo yokuqandisa imane ikhiye kukho konke lokho kulunga komkhiqizo ovuthwe ngokuphelele.
Endabeni yomkhiqizo omusha, kuthatha isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili kusukela ngosuku kukhiwa imifino kuze kube usuku lapho kudliwa khona, isikhathi esichithwa ngesikhathi kugcinwa, kuthuthwa nasemashalofini ezitolo ezinkulu. Ngaso sonke lesi sikhathi imifino emisha ingalahlekelwa ngamaphesenti angama-45 wezakhamzimba ezibalulekile. 
Ngabe ukudla kwe-IQF kungalusindisa usuku?
Kuzothatha okungaphezulu kakhulu kwalokho ukubhekana nenkinga yemfucumfucu yokudla, kepha nakanjani kungadlala indima ebalulekile ekhambweni eliyinkimbinkimbi kakhulu lenkinga eyinkimbinkimbi kakhulu.
Ukusuka ekwehliseni imfucuza yasendlini ngenxa yokusebenziseka okulula kwemali edingekayo ngenkathi kugcinwa okusele efrijini, ubuchwepheshe be-IQF bungasiza ngisho nokuthambekela okuvelayo kokudla okuphuzwayo - ngokufaka idayisi nokuqandisa kwe-IQF ngenye indlela kulahle izingcezu zemikhiqizo ezingaphelele noma ezingalingani.
Ngaphezu kwalokho, ixazulula inkinga yokwabiwa kokudla ezifundeni ezinenqwaba yomkhiqizo omusha lapho izithelo nemifino emisha ngokweqile kusaphazwa khona emasimini ngenxa yokungenzeki kokuthengiselana.
Okokugcina, kodwa-ke, ubuchwepheshe be-IQF bungaba maphakathi wokusungula amamodeli wamabhizinisi asimeme emiphakathini enenselelo yezomnotho lapho umkhiqizo omusha ungavunwa noma ungavunwa khona.
Sekukonke, imikhiqizo efriziwe esezingeni eliphezulu isha sha, iyimiqemane, iyasebenziseka, futhi iyaqhubeka nekusasa leplanethi yethu. Abathengi namabhizinisi kufanele ngokuphelele futhi bazoguqula umbono wokuthi ukudla kukhiqizwa futhi kudliwe kanjani njengoba singekho isisombululo esisodwa senkinga yemfucumfucu yokudla emhlabeni, kepha kuzodingeka ukuthi sihlanganise imibono eminingi ehlukene, emisha kanye nesibindi ukuze sibe okungenani ithuba lokuphumelela.
Isikhathi Iposi: May-13-2021
Idolobhana laseLumei, idolobha laseChangqiao, isifunda saseZhangpu, iZhangzhou, iFujian, neChina
Kungenzeka yini ukuthi ukudla kwe-IQF kube yisixazululo ...
Ukufunda: Izithelo ezomiswe yiqhwa, imifino ma ...
Ukufunda: Ukukhula kwesidingo sokudla okonakalayo ...